Ny fiandrasana ny fitsenana an'i Jesosy
Ny olona izay mihaino ny tenin’Andriaamnitra betsaka dia mandroso mandrakariva satria ny ady amin’ny devoly dia 24h/24. Indraindray misy fahakiviana fa rehefa mandre ny tenin’Andriamanitra dia mitraka foana ! Tsy ampy izany ny mivavaka indray mande isak’erinandro.
Azo adino fa izay mahazo tenin’Andriamanitra betsaka dia ho adininy imbetsaka koa
Manao ahoana ny fiainam-panahinao izay mamaky sy mihaino ny tenin’Andriamanitra ?
Rehefa mihaino ny tenin’Andriamanitra dia ampiaro amin’ny fiainana, ankatoavy izany.
1 / Torolalana mihatrika ny fitsenana an’i Jesosy mba hahafahana miala ilay fahoriana lehibe eto ambonin’ny tany
Tsy ny olona rehetra no afaka mitsena an’i Jesosy fa mila mitandrina isika !
Izao vanin’andro iainantsika izay dia vanim-potoanan’ny Fanahy Masina ( hifaneraseran’Andriamanitra amin’ny olombelona)
Izany hoe vanim-potoana hikatsahana ny firaisana amin’ny Fanahy Masina, ny tenin’Andriamanitra, amin’i Jesosy
Jaona 15 :7 « Raha miray amikohianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany »
Ny firaisana dia mitera-bokatra izay entina mihatra ny fotoana iainantsika.
- Miandry ny fotoana andraisan’ny Tompo antsika
Vanim-potoana fiambenana izao
Lioka 21 :36 « Fa miambena ka mivavaha mandrakariva, mba hahery hianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan’ ny Zanak’ olona »
Matio 26 :41 « Miareta tory sy mivavaha hianareo, mba tsy hidiranareo amin’ ny fakam-panahy; mety ihany ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery. »
Fotoana tsy tokony hahabe torimaso antsika izao, tsy fantatra izay fotoana hiavian’ny Tompo
A / Katsaho ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinany
Manaova safidy matotra hisaina ny mandrakizay
Matio 6 :33 « Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany »
Izany hoe avelao Jesosy hiditra ao anatinao
Lioka 17 :21 « Ary ny olona tsy hanao hoe: Indro, etỳ! na erỳ! fa, indro, ny fanjakan’ Andriamanitra dia ao anatinareo »
Andriamanitra dia manoro lalana anao ny amin’ny tokony ataonao ny amin’ny ankohonana, hikarakarana ny asa aman-draharaha
Efesiana 6 :13 « Ary noho izany, diaraiso avokoany fiadian’ Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin’ ny andro mahory; ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra hianareo »
Inona ny fiadiana ?
B/ Raiso ny tenin’Andriamanitra
Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha, betsaka ny olona tapaka lalan-dra fa miasa mafy ny loha !
Efesiana 6 :17 « Ary raiso ny famonjenaho fiarovan-doha sy ny tenin’ Andriamanitra ho sabatry ny Fanahy »
Ampilamina ny fo sy saintsika no hidiran’i Jesosy ao anatintsika ao, ampiditra ny fanjakan’Andriamanitra no hidirany ao amin’ny fiainantsika.
Galatiana 5 :22 « Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana,fifaliana, fiadanana, fahari-po fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana »
Tsarovy fa tsy diploma ny fahazahoana ny famonjena, mila mitandrina fona !
Eo ambonin’ny teny fikasan’Andriamanitra ho an’ny olana eo amin’ny fiainanao, ny zavatra hatrehantsika
Vavaka : « … mbola tsy teraka akory aho dia maty hamonjy ahy Ianao Jesosy, atao tsapako isan’andro izany »
Mila mino ny teny fikasan’Andriamanitra
Ny fiainana izany dia eo ambonin’ny tenin’Andriamanitra, mila mihaino izany imbetsaka isika
Fa raha hitovy amin’izao tontolo izao ihany isika dia mandehana manao « business » be fa aza mivavaka.
Fa ny Tompo efa nilaza
Malakia 3 :18 « Ka dia ho hitanareo indray ny tsi-fitovian’ nymarina sy ny meloka, dia ny manompo an’ Andriamanitra sy ny tsy manompo Azy » Fa mila mankato ny tenin’Andriamanitra isika !
C / Ampitoy ny vavaka
Raha vao mihiratra ny maso dia mivavaka, amin’ny fotoana hahafahana manao izany, tsy mangataka foana fa misaotra koa, mivavaha ho an’ny tenin’Andriamanitra izay vakianao mba ho tany lonaka ny fonao mandray izany mba hanamboaran’Andriamanitra ny fonao.
1 Tesaloniana 5 :14 « Mivavaha, ka aza mitsahatra »
Raha tsy ampy vavaka ianao dia vizaka, ataovy feno vavaka ny fiainanao satria sarotra ny mihaino sy mandray ny tenin’Andriamanitra na ny mamaky ny baiboly aza dia sarotra aminao raha tsy milona tsara ambavaka ianao
Ny vavaka no miteraka ny finoana ao anaty mba hahafanao mandray ny fiadian’Andriamanitra.
Jesosy mivavaka andro aman’alina
Manaova safidy matotra hisaina ny mandrakizay, io manome torolalana
Ny mandrakizay eritreretina satria io no hanomezan’Andriamanitra anao ny torolanana iarovanao ny ankohonanao, izany hoe ny hibanjinanao foana ny ho avy : ilay 1000 taona, ilay Jesosy ho avy ? Andriamanitra no hanoro anao ny fomba hitondranao ny ankohonana, ny fiainana, ny asa
- Aona ny ataoko hahatonga ahy andeha amin’ny fahamasinana sy ny fahadiovana, hanana firaisana amin’i Jesosy satria ny mandrakizay zavatra maharitra
Ho marina aminao ilay teny hoe hanampy anao ireo rehetra ireo.
Katsaho ny mandrakizay ny hamonjy fanahin’olona, hoy ny Tompo
Daniela 12 :3 « Ary izay hendry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra; ary izay mamerina ny maro ho amin’ nyfahamarinanadia ho tahaka ny kitana mandrakizay doria »
Ny tanjona dia ny hitsena an’i Jesosy eny amin’ny rahon’ny lanitra.
Mahonon-tena amin’ny zavatra rehetra
1 korintiana 9 :25 « Ary ny mpihazakazaka rehetra diamahonon-tena amin’ ny zavatra rehetra. Kanefa ireny dia mitady satro-boninahitra mety ho lò ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho lò »
Eo amin’ny fiainana andavan’andro betsaka ny zavatra tokony ahena, tsy hoe tsy matory, tsy mihinana, tsy mijery television, … fa ahena
Miambena fa manao sivana Andriamanitra, tsy ny olona rehetra no mitsena Azy, fidiany ny olona hitsena Azy
Mahonona tena amin’ny fivavahana
Raha te hahavokatra isika dia tsy maintsy maty aloha ilay olona taloha (ianao taloha) nateraka indray. Rehefa lasa olom-baovao ianao dia rakofan’i Jesosy amin’ny rany amin’izay ny fiainantsika dia miteraka vokatra dia mahonon-tena
Mitadiava ny firaisana amin’i Jesosy
Sahia manambara ny finoana :
Mahonona tena amin’ny fivavahan Manàna fahasiana manambara ny finoana an’i Jesosy, ny tenin’Andriamanitra manoloana ny fotoan-tsarotra, ny fakam-panahy
Ohatra tantaran’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego (vakio Daniel 3 :18)
Manana fahasiana miteny hoe « sanatria amiko no hanao izany…izaho tsy hanao tsolotra, kolikoly, tsy angalatra ampahabemaso » fa haninjitra ny tanany amin’izay Andriamanitra fa aza matahotra.
« tsy hiova aho na dia tsy hisy valim-bavaka aza,
Marina foana ny tenin’ny Tompo hoe
Romana 10 :11 « Fa hoy ny Soratra Masina:Tsy ho menatra izay rehetra mino Azy »
Hoy ny Tompo
Eksodosy 20 :24b « … eo amin’ ny fitoerana rehetra izay ampahatsiarovako ny anarako no hanatonako anao syhitahiakoanao. »
Mivavaka ho an’ny hafa
Mivavaha ho an’ny ralahy sy anabavy mandalo fotoan-tsarotra, aretina mafy… ny vavaka ataonao no androtsahan’Andriamanitra ny fahasoavany ho anao sy hamangiany anao
Joba 42 :10 « Ary Jehovah nampody ny fiadanan’ i Joba, raha nivavaka ho an’ nysakaizanyizy, ka dia nanome azy indroa toraka izay nananany fahiny »